Dowlada Mareykanka oo heshiis yaab leh la gashay dowladda Soomaaliya – Madal Furan
Hoy > Warka > Dowlada Mareykanka oo heshiis yaab leh la gashay dowladda Soomaaliya
Dowlada Mareykanka oo heshiis yaab leh la gashay dowladda Soomaaliya
Muqdisho (Madal Furan) – Dowlada Soomaaliya ayaa la saxiixatay heshiis ku kacaya inta sanadkan ka dhiman ($400,000) shirkad Maraykan ah taasoo ka caawineysa dowlada Soomaaliya sidii uu maamulka Trump uga qaadi lahaa xayiraada uu saaray ciidamada Soomaaliya iyo weliba xayiraada saaran Soomaalida inay u safraan dalka Maraykanka.
Heshiiskan ayaa waxaa horaantii bishan u saxiixay dowlada Soomaaliya safiirka u fadhiya Qaramada Midoobay Abukar Osman halka shirkadda Sonoran Policy Group (SPG) ay u saxiixday Christian Bourge oo ah Agaasimaha Guud ee Shirkadda u ololonaysa dowlada Soomaaliya oo fadhigeedu yahay gobolka Arizona.
Shirkadda SPG ayaa hore waxa ay ugu ololeysay dowlada Kenya waxaana ku jira mas’uuliyiin xilal ka haya Maamulka Trump.
Si gaar ah ayay shirkadan waxa ay u diyaarinaysaa kulamo ay la yeelato madaxda Aqalka Cad iyo xildhibaanada taasoo ujeedkeedu uu yahay sidii qeyb ahaan loo joojin lahaa xayiraada saaran ciidamada Milatariga Soomaaliya.
Arrimo la xiriira musuqmaasuq ee ka dhex jira dowlada Soomaaliya ayay dowlada Maraykanku u hakisay sanadkii la soo dhaafay gargaar isugu jira cunto iyo shidaal oo ay siin jirtey ciidamada Soomaaliya.
Heshiiska ay la gashay dowlada Soomaaliya shirkadan fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa waxaa ka mid ah sidii ay ugu ololeyn lahayd in loo fasaxo muwaadiniinta Soomaaliyeed inay u safraan dalka Maraykanka iyadoo hore Maamulka Trump xayiraad ugu soo rogay wadamo Islaam ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay iyo weliba wadamada Waqooyiga Kuuriya iyo Venezuela.
Sidoo kale SPG ayaa waxa ay fududeyn doontaa booqasho uu mustaqbalka ku tago dalka Maraykanka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed sida uu heshiisku dhigayo.
Heshiiska oo bil walba dowlada Soomaaliya siin doonto SPG boqol kun oo Dollar afarta bil ee soo socota ayaa qorshuhu yahay in shirkadan ay ka caawiso dowlada Soomaaliya sidii loo wanaajin lahaa muuqaalka guud ee laga haysto dalka Soomaaliya.
Qorshaha ayaa ah in heshiiska la cusbooneysiiyo marka uu dhamaado sanadka iyadoo shirkadu u howgali doonto sidii deymaha lagu leeyahay dowlada Soomaaliya loo cafin lahaa isla markaana ay lacag u siin lahaa Bangiga Adduunka.
Masuuliyiintii ugu badneyd ee iska casilay maamulkii Madaxweyne Cabdi Iley
Ceel Afweyn oo Calanka Soomaaliya laga dul lulay (Kaana siib kana saar)
Weriye Coldoon oo mar kale maxkamadi xukuntay